श्रीमतीले संसार छोडेर गएको पाँच दिनमै श्रीमानले पनि संसार छाडे छोरा छोरिको बेहाल ! | Citizen FM 97.5 Mhz
श्रीमतीले संसार छोडेर गएको पाँच दिनमै श्रीमानले पनि संसार छाडे छोरा छोरिको बेहाल !
काठमाडौ – संगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाने कुरा नयाँ प्रेमीहरु निकै चर्चामा छ । माया गर्दा एकले अर्कोलाई प्रभावमा पर्ने यस्तो बाचा गर्ने गरिन्छ तर यो बाचा कसैले पलान गर्दैनन् ।
गुल्मीका एक जोडीले भने यो बाचा पूरा गरेका छन् । बेलायतमा बस्दै आएका चन्द्रकोट ४ शान्तिपुर स्थायी ठेगाना भएका ४९ वर्षीय विजयकुमार पुन र उनकी धर्मपत्नी ५१ वर्षीया रत्नाकुमारी गुरुङ पुनको पाँच दिनको अन्तरालमा निधन भएको हो । रत्नाकुमारीको जनवरी ३ मा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बेला निधन भएको हो भने उनका पति विजयको बिहीबार निधन भएको हो ।
उनीहरुका २ छोरी र एक छोरा रहेका छन् । गुल्मी जिल्ला समाज युकेका संस्थापक अध्यक्ष हाल सल्लाहकार रहेका ओम थापा काउचाले उनीहरुको पाँच दिनको अन्तरालमा निधन भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत काउचाले पुन दम्पतिको निधनको खबरले बेलायतबासी गुल्मेली अत्यन्तै मर्महात भएको जनाएका छन् ।
पशुपतिनाथको दर्शन गरी पौष २५ गते शनिवारको राशिफल हेर्नुहोस्
गायक प्रकास सपूतले ममता माई आमाको जन्मदिनमा फोटो सेयर गर्दै जन्मदिनको शुभकामना दिए
बाबुराम भट्टराईलाई ट्युमर भएको आशंका उपचारका लागि आज दिल्ली जाँदै
हिजो हाम्रो पार्टी फुटाइदिए, अब पीडा भोग्ने पालो प्रचण्डलाई ? : कमल थापा
बाबुराम भट्टराईलाई ट्युमर भएको आशंका उपचारका लागि आज दिल्ली…
हिजो हाम्रो पार्टी फुटाइदिए, अब पीडा भोग्ने पालो प्रचण्डलाई…